जब एक महिला मनोवैज्ञानिक डाक्टरलाई आफ्नै अस्पतालमा आएका एक मनोरोगी विरामीसंग प्रेम बस्यो…. – Kavrepati
Home / समाचार / जब एक महिला मनोवैज्ञानिक डाक्टरलाई आफ्नै अस्पतालमा आएका एक मनोरोगी विरामीसंग प्रेम बस्यो….
admin September 20, 2021	समाचार Leaveacomment 24 Views
एजेन्सी । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीसंग डाक्टरको प्रेम बस्यो भने के होला ? बेलाइतकी एक महिला मनोवैज्ञानिक डाक्टरलाई यस्तै भएको छ । ति महिला डाक्टरको प्रेम आफ्नै अस्पतालमा आएका एक मनोरोगी विरामीसंग बस्यो । ति डाक्टरको नाम एलिनर हार्पर हो । प्रेम गरे बापत उनलाई ठूलो मुल्य पनि चुकाउनु परेको छ ।
डा हार्पर २०१७ देखि एनएचएस ट्रस्टमा काम गर्थिन । उनी विवाहित पनि हुन् । हार्परको कामले मनोवैज्ञानिक कठिनाइहरूको साथ जटिल बिरामीहरूलाई मद्दत गरीन् । तर केही समय पछि त्यो अस्पतालमा एक विरामी आए जसका कारण ति डाक्टरको पुरै जिवन नै बदलियो ।
यस व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू थिए। एकदिन उपचारको क्रममा यस व्यक्तिले डा। हार्परलाई भन्यो कि उनले डाक्टरलाई माया गर्छ । बिरामीले त्यसो भनेपछि डाक्टरले उनलाई अंगालिन् । सामान्यतया, डाक्टरहरूले बिरामीहरूलाई सान्त्वना दिन विरामीलाई यस्तो गर्छन । यो ब्यवसायीक काम हो । विरामीलाई अपनत्वको महशुष गराउन डाक्टरहरुले नजिक भएको महशुष दिलाउँछन् ।
तर डा। हार्पर पनि यस व्यक्तिको मायामा परेकी थिइन् । अर्को उपचार सत्रमा उनीहरूले एक अर्कालाई चुम्मन गरे र बिरामीसँग आफ्ना भावनाहरू साझा गरे। त्यसपछि, उनीहरूको सम्बन्ध धेरै छिटो अगाडि बढ्न थाले। थेरापी सत्रहरू बाहेक, दुबै होटल र अन्य ठाउँहरूमा एक अर्कालाई भेट्न लागे। डा। हार्परले यो बिरामीलाई पनि भनिन् कि उनी विवाहित छन् तर उनी आफ्नो पतिलाई माया गर्दैनिन र उनीसँग बस्न चाहँदिनन् ।
उही बिरामीको बिवाह समाप्त भइसकेको थियो र उनी डराएका थिए कि यदि उनकी पूर्वपत्नीले यसबारे थाहा पायो भने उनले उनलाई कहिल्यै आफ्ना बच्चाहरूलाई भेट्न दिनेछैनन्। यस्तो अवस्थामा, दुबैसँग यो सम्बन्ध गोप्य राख्नुपर्ने कारणहरू थिए। यद्यपि डा। हार्पर खुशी थिएन कि उनीहरूको सम्बन्ध गोप्य हो, तर आफ्नो कामका कारण, उसले त्यसो गर्नुपर्‍यो।
तर हार्पर र उसको बिरामीको सम्बन्धमा समस्या हुन थाल्यो र डेढ बर्ष पछि उनीहरूले यो सम्बन्ध अन्त्य गर्ने निर्णय गरे। केही महिना पछि, उनले आफ्नो जागिरबाट पनि राजीनामा गरीन्। तर राजीनामा भएको केही दिन पछि बिरामीको भूतपूर्व पत्नीले डा। हार्परलाई मु द्दा हालीन् ।
यद्यपि जब एनएचएस ट्रस्टले यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्‍यो, उनीहरूले पत्ता लगाए कि डा। हार्परले उनको ओहदा दुरुपयोग गरेको छ। उसलाई थाहा थियो कि विरामीको अवस्था संवेदनशिल छ , यद्यपि उनले यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाए र उनी आफ्नो कामको लागि पश्चाताप पनि गर्दिनन् । उनको ट्रष्टले चाँडै यस विषयमा एक फैसला दिन सक्छ । प्रतिकात्मक तस्बिर
Previous काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले जे गरे…..
Next बिहे कहिले गर्ने भनेर पत्रकारले सोधेपछि अनमोलले दिएको जवाफले सबै चकित